Mabhuku mana ekukoshesa zvemashiripiti | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku mana ekukoshesa zvemashiripiti
Vazhinji venyu munogona kunge makaverenga manoverengeka akawandisa eiyo yazvino iyo yakaita kuti mashiripiti nenhaka yezvinyorwa zveLatin America zvizivikanwe kune dzimwe nyika pasi pema60. Vamwe, kune rumwe rutivi, vanogona kufarira zvimwe zvinongedzo pavanosarudza nyaya nyowani. kure nezvose zvawamboverenga kare, mune izvo zvezuva nezuva uye zvemweya zvinouya pamwechete muresitoreti isingadzivisike.
Izvi Mabhuku mana ekukoshesa zvemashiripiti vanogona kuve mavambo akanaka kune vese avo vanosarudza kuenda kunotsvaga iyo yema butterflies.
2 Imba yeMweya, naIsabel Allende
3 Pedró Páramo, naJuan Rulfo
4 Semvura yechokoreti, naLaura Esquivel
Iyo inonyanya kuzivikanwa yenhau yemashiripiti, uye pamwe Latin America, yaive nyaya yeBuendía uye ye Macondo, iro guta rakapihwa naGabriel García Márquez muichi chinyakare chakaburitswa muna 1967. Zvipoko zvinowanda pakati pedzimba dzedhaka, unozvitaura iwo mapururu eruvara uye, kunyanya, masvosve zvimwe zvezvinhu zvakajeka zvemashiripiti chaiwo anogara mumapeji ebhuku rino. mairi, kana iwe ukazvibvumira kutakurwa (uye iwe ukadzora wedzinza muti kuburikidza neGoogle) inokukunda.
Iyo yekutanga runyorwa nemunyori weChilean yaive budiriro, nekutenda muchidimbu kune magnetism yechirongwa chemhuri chakapararira pamusoro pezvizvarwa zvina munguva yepashure-yekoloni yeChile. Mumapeji ese ebhuku, mweya inoshambadzirana nevanhu venyama uye zviitiko zvezvematongerwo enyika zvenguva iyoyo zvinotinyudza muLatin America yemashiripiti kwete pasina imwe mweya wesipo opera uye kunyange zvinokanganisa kubva mune inova mune kodhi. Iyo inoverengeka yaizoenderana neiyo bhaisikopo muna 1994 uye nyeredzi Jeremy Irons naMeryl Streep.
Pedró Páramo, naJuan Rulfo
Zvichiri kubva mukugadziriswa kwefirimu kwaPedro Páramo, mumwe weakanyanya kufumura mashiripiti.
Sekureva kwenyanzvi, iyo yega inoverengeka nemunyori weMexico yaive wekutanga kutanga mashiripiti echokwadi mafambiro. Izvo hazvishaye zvimwe zvezvakakosha zvemhando iyi: vatambi vari munzvimbo ine hurombo uye yakaparadzwa, kuvapo kwemweya, kana kuparara kwepfungwa yenguva yakamutswa nekushanya kweiye mudiki Juan Preciado kuguta reComala, mu renje reJalisco, mukutsvaga baba vake: Pedro Páramo.
Yakagadziriswazve kumabhaisikopo muma90s, ino inovavhizheni yeMexico Esquivel yakaburitswa muna 1989 yakarondedzera nyaya yerudo pakati paTita naPedro panguva yeRevolution yeMexico, hwaro hwakakosha hwekuita kwemashiripiti kweMexico. Mupiro weruzivo urwu uri mukushandiswa kwezvakagadzirwa uye mabikirwo eMexico anoshandiswa sedimikira kutaurira manzwiro evatambi. Senge Makore Makore Ekusurukirwa, mhedzisiro yebhuku iyi ndeimwe yezvikonzero nei ichikosha kunyengerwa.
Izvi Mabhuku mana ekukoshesa zvemashiripiti kuva kurudziro dzakanakisa kana uchitanga mumhando yakashandurwa nevanyori vanobva kune dzimwe nyika se Haruki Murakami (Kafka pamahombekombe) kana kunyanya Salman Rushdie (Vana vepakati pehusiku).
Iwe unofarira zvemashiripiti? Ndeapi mamwe mazano aungade kupa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku mana ekukoshesa zvemashiripiti
M. Bhonasi akadaro
Pasina mubvunzo. "Makore Mazana Ekusurukirwa" ndiwo mashiripiti pane mana.
Asi "Pedro Páramo", iyo yandakaverenga kanopfuura kaisere, inoverengeka inondibata uye pese pandinoiverenga ndinowana zvakasiyana siyana zvandisina kuwana kare.
Pindura kuna M. Bono
Ndakaverenga ina, iyo yandakanyanyofarira kupfuura Makore Mazana Ekusurukirwa. Desoués Semvura yechokoreti uye Imba yemweya. Pedro Ppáramo Ndakaiverenga makore mazhinji apfuura, hapana chandinorangarira nezvazvo. Yakabata pfungwa dzangu, nekuti yakanga yakanyanya kusiyana nemanyoreri ese akange apfuura nemumaoko angu.Nguva dzinofadza pandaigara kuCuba,
Jose Luis Dominguez akadaro
Nhoroondo yakakosha yakashaikwa kuti inzwisise zvemashiripiti uye inoverengeka inoenderana nezvakataurwa zvina, "Ndangariro dzeramangwana", rakanyorwa naElena Garro, rakaburitswa muna 1963 uye iro rakazivikanwa nevakawanda vaverengi uye zvinyorwa. vatsoropodzi.
Pindura kuna Jose Luis Dominguez
Milton argueta akadaro
Kupotsa "Ishe Ishe" naMiguel Ángel Asturias (Guatemala) iyo yaakakunda nayo Mubayiro weNobel weMabhuku. Kune vamwe, muvambi wemashiripiti chaiwo.
Pindura Milton Argueta
Kuti upedze iyi yakanakisa cast, pane kusipo "Kutamba kwemadzvinyu" naDavid de Juan Marcos, rakaburitswa naPlaneta. Uyu murume anobva kuSalamanca akatora hunhu hwemashiripiti hwaakamutangira García Márquez.
tariro melecio akadaro
Ndiri mudiwa werudzi urwu, ndakaverenga zvese zvinyorwa zvambotaurwa asi pasina kupokana ndinofunga kuti apo Gabo paakanyora Makore Mazana eSolitude akazviita nenzira yakapusa, nenzira iyi akapotsa kupfuura mudzidzisi Juan Rulfo; Iko maonero angu ekuzvininipisa!
Pindura Esperanza Melecio
Makwikwi epasi rese ekunyora muna Kukadzi
Kukadzi nyika makwikwi ekunyora